Musharrax Gelle: "Shidaalku Waa Badeeco Siyaasadeed Intuusan Noqon Badeeco Dhaqaale" - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Musharrax Gelle: “Shidaalku Waa Badeeco Siyaasadeed Intuusan Noqon Badeeco Dhaqaale”
Musharrax Gelle: “Shidaalku Waa Badeeco Siyaasadeed Intuusan Noqon Badeeco Dhaqaale”
Murashax Madaxweyne Danjire Dr. Dahir MaxamuudGeelle ayaa ka qaybgalay kulan cilmiyeed ay sooagaasimeen majaladda Somali Magazine. Kulanka waxaa diiradda lugu saarayay oo looga dooday khayraadka dalkaoo uu ka mid yahay shidaalku.
Murashaxu wuxuu xog ogaalnimo durugsan u leeyahayxeerarka iyo heshiisyada dalalka hodanka ku ah khayraadkaShidaalka, wuxuuna muddo Safiir kasoo ahaa dalal ay iskaga gudbaan wabiyo fara badan, wuxuu qayb ka ahaashirar looga hadlayay wadaagga khayraadka iskaga gudbaqaaradaha sida wabiyada.
Murashaxa ayaa iftiimiyay khatar huwan dhaldhalaalkaheshiisyada Shidaalka iyo khayraad ka kalaba, wuxuu kadigay in ay Soomaaliya ku siranto heshiisyo wax u dhibikaraa mustaqbalka ubadkeenna. Murashaxu wuxuu hoga-tusaaleeyay in uu khayraadka Shidaalku Sun Soomaaliya ku noqon karo haddaan laga fiirsan, wuxuu bidhaamiyay; haddii shidaal soo saaris loo hawoodo ayadoon la hayn Xeerar nidaaminaye iyo aqoon ku filan in uu Sun ku noqon karo Soomaaliya khatar waynina ku imaan karto dalka.
Murashaxu wuxuu hoosta ka xariiqya in Shidaal qodista Soomaaliya ay asal u tahay siyaasad loo dhan yahay (inclusive politics), wuxuu sheegay in aan loo hawoon karin inta ay Soomaali siyaasadda ku kala maqan tahay, haddii lugu dhiirado in Shidaal qodis la galo ayadoon lahay heshiis Soomaali ku dhan tahay, wuxuu sheegaya in ay wax gaari karaan midnimada dalka iyo ummadda.
Wuxuu carrabka ku adkeeyay, haddii la qaldo arrimaha siyaasaddab iyo heshiisyada la xiriira Shidaalka Soomaaliya; in xaalku noqonayo ‘qaldaa ma qaldo’ oo uu u la jeedo, waxaa laga dhaxlayaa cawaaqib xumo aan laga soo kabsan abid. Murashaxa oo hadlaya ayaa yiri Badroolku inta uusan noqon Badeeco dhaqaale, waa Badeeco siyaasadeed, qaldaa ma qaldo, dawladihii ay ka qalloocdeen dhiilalkii nuucaas ahaa, kala googo’ iyo burburaa ku yimid”, wuxuu raaciyay in ay arrinta Shidaalku u baahan tahay heshiis siyaasadeed iyo saaxiibo caalami ah oo ku haboon in lala yeesho heshiis, wuxuu sheegay in aan suuq kasta layska gayn karin badeecada Shidaalka cid kastana aan laga gadi karin.
Murashaxa ayaa kusoo afmeeray in ay ka shaqaynayo siyaasad degan oo ku suuban in ay Soomaaliya noqoto meel lugu noolaan karo dunidana la geli karta heshiiyo nuucwalba leh, wuxuu tilmaamay in loo baahan yahay in musuqameel ugu xiro lagana fogeeyo heshiisyada caalamiga ah sida kuwa Batroolk.
Previous articleAhlusunna oo ku dhawaaqday go’aamo cusub
Next articlePresidential Candidate Gelle hails Somaliland Senate elections as ‘fair and transparent’